Q: तपाईं कारखाना हुनुहुन्छ?
A: हामी Dongguan, China मा अवस्थित निर्माता हौं। 10 वर्ष भन्दा बढीको लागि लेबलिङ मेसिन र प्याकेजिङ उद्योगमा विशेष, हजारौं ग्राहक केसहरू छन्, कारखाना निरीक्षणको लागि स्वागत छ।
Q: तपाइँको लेबलिंग गुणस्तर राम्रो छ भनेर कसरी सुनिश्चित गर्ने?
A: हामी बलियो र टिकाउ मेकानिकल फ्रेम र प्रिमियम इलेक्ट्रोनिक भागहरू जस्तै Panasonic, Datasensor, SICK... स्थिर लेबलिङ कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्दैछौं। अझ के छ, हाम्रा लेबलरहरूले CE र ISO 9001 प्रमाणीकरण स्वीकृत गरेका छन् र प्याटेन्ट प्रमाणपत्रहरू छन्। यसबाहेक, Fineco। 2017 मा चिनियाँ "नयाँ हाई-टेक इन्टरप्राइज" लाई सम्मानित गरियो।
Q: तपाईको कारखानामा कतिवटा मेसिनहरू छन्?
A:हामीले मानक र कस्टम-निर्मित टाँसेको लेबलिङ मेसिन उत्पादन गर्छौं। स्वचालन ग्रेड अनुसार, त्यहाँ अर्ध स्वचालित लेबलरहरू र स्वचालित लेबलरहरू छन्; उत्पादनको आकार अनुसार, त्यहाँ राउन्ड उत्पादनहरू लेबलरहरू, वर्ग उत्पादनहरू लेबलरहरू, अनियमित उत्पादनहरू लेबलरहरू, आदि छन्। हामीलाई देखाउनुहोस्। तपाईंको उत्पादन, लेबलिङ समाधान तदनुसार प्रदान गरिनेछ।
Q: तपाईको गुणस्तर आश्वासन सर्तहरू के हो?
फिनेकोले पदको जिम्मेवारीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
1) जब तपाइँ अर्डर पुष्टि गर्नुहुन्छ, डिजाइन विभागले उत्पादन अघि तपाइँको पुष्टिकरणको लागि अन्तिम डिजाइन पठाउनेछ।
2) डिजाइनरले प्रत्येक मेकानिकल भागहरू सही र समयमै प्रशोधन गरिएको सुनिश्चित गर्न प्रशोधन विभागलाई पछ्याउनेछ।
3) सबै भागहरू पूरा भएपछि, डिजाइनरले विधानसभा विभागलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दछ, जसले समयमै उपकरणहरू भेला गर्न आवश्यक छ।
4) जम्मा गरिएको मेसिनको साथ समायोजन विभागमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरियो। बिक्रीले ग्राहकलाई प्रगति र प्रतिक्रिया जाँच गर्नेछ।
5) ग्राहकको भिडियो जाँच / कारखाना निरीक्षण पछि, बिक्री वितरण व्यवस्था गर्नेछ।
6) यदि ग्राहकलाई आवेदनको क्रममा समस्या छ भने, बिक्री पछि बिक्री विभागलाई सँगै समाधान गर्न सोध्नेछ।
प्रश्न: गोपनीयता सिद्धान्त
A: हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरूको डिजाइन, लोगो, र नमूना हाम्रो अभिलेखहरूमा राख्नेछौं, र समान ग्राहकहरूलाई कहिल्यै देखाउने छैनौं।
Q: हामीले मेसिन प्राप्त गरेपछि त्यहाँ कुनै स्थापना दिशा छ?
A: सामान्यतया तपाईले लेबलरलाई प्राप्त गरेपछि सीधै लागू गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले यसलाई तपाईको नमूना वा समान उत्पादनहरूसँग राम्रोसँग समायोजन गरेका छौं। यसबाहेक, निर्देशन पुस्तिका र भिडियोहरू प्रदान गरिनेछ।
प्रश्न: तपाईको मेसिनले कुन लेबल सामग्री प्रयोग गर्दछ?
A: आत्म-चिपकने वाला स्टिकर।
प्रश्न: कुन प्रकारको मेसिनले मेरो लेबलिङ आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ?
A: Pls तपाईंको उत्पादनहरू र लेबल साइज आपूर्ति गर्नुहोस् (लेबल गरिएको नमूनाहरूको चित्र बरु उपयोगी छ), त्यसपछि उपयुक्त लेबलिङ समाधान तदनुसार सुझाव दिइनेछ।
प्रश्न: मैले तिरेको सही मेसिन पाउनेछु भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने कुनै बीमा छ?
A: हामी Alibaba बाट एक साइट चेक आपूर्तिकर्ता हो।व्यापार आश्वासनले गुणस्तर सुरक्षा, समयमा ढुवानी सुरक्षा र 100% सुरक्षित भुक्तानी सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
Q: म कसरी मेशिनहरूको स्पेयरहरू प्राप्त गर्न सक्छु?
A: गैर-कृत्रिम क्षतिग्रस्त स्पेयरहरू सित्तैमा पठाइनेछ र 1 वर्षको वारेन्टीको अवधिमा निःशुल्क ढुवानी गरिनेछ।